सप्तरीमा मलको चरम अभाव कायमै - News Today
एक बोरा मल लिन चर्को घाममा चार दिनसम्म लाइन
Date: २० श्रावण २०७५, आईतवार २१:२७
राजविराज, १० साउन । साउनको तेस्रो साता बित्नै लागेको छ तर वर्षाको नामोनिसान छैन । वर्षा हुने आशमा आकाशतर्फ हेरेरै चित्त बुझाउने अवस्था छ । केही सिंचित क्षेत्र बाहेक सप्तरी जिल्लाका अधिकांश धान खेत बाँझै छ । वर्षा होला र खेत रोपौंला भन्ने आशका साथ जोतेर तयार पारिएका खेतहरु अझैं सुख्खा छन् । चालीस डिग्रीसम्मको चर्को तापक्रमका कारण धानका बीऊ सुक्न थालेका छन् । बेर्ना रहेको खेत र रोपिएका खेतमा समेत धाँजा फाटेको छ । ‘वर्षा होला र धान रौपौंला’ भने आश मारिसकेका कतिपय किसानले धानको बीऊ समेत काटेर पशुचौपायालाई खुवाउन थालेका छन् ।
यस्तै अवस्था छ सप्तरी सहित मधेशका अधिकांश जिल्लाहरुको । यस्तो प्रतिकुल अवस्थाका बावजुद पनि किसानले झिनो आशाका साथ मोटर, पम्पिङ्गसेटको भरमा धान रोपिररहेका छन् । वर्षा नहुँदा खेती गर्न नपाएको तथा रोपिएका खेतमा समेत धाँजा फाट्न थालेको पीडा त किसानहरुलाई छँदैछ, त्यसमाथि मलखादका लागि समेत तीन–चार दिनसम्म चर्को घाममा बस्नुको पीडा झन भयावह छ ।
एका बिहानै खाद लिनका लागि सदरमुकाम आउने गर्छन् तर साँझ निन्याउरो अनुहार लिएर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । वर्षैपिच्छे सप्तरी सहित मधेशका किसानहरुले भोग्दैआएको पीडा यसवर्ष समेत दोहोरिएको छ । भोको पेट लिएर चर्को घाममा लाइन बसेका कतिपय किसान बेहोस समेत हुने गरेका छन् ।
खेती किसानी हुने मधेशका जिल्लाहरुमा गहुँ बाली लगाउने बेला होस् या धानबाली लगाउने बेला । मलखादका लागि पनि चरम पीडा खेप्नु किसानहरुका लागि नियति नै बनिसकेको छ । भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनीधिहरु पनि किसानको समस्याप्रति गम्भीर नभएकोमा विष्णुपुर गाउँपालिका–७ का योगेन्द्र रायले आक्रोश व्यक्त गरे । लाइन बसेका उनले निधारको पसिना पुछ्दै भने ‘हामीले को माथि विश्वास गर्ने ? हामीले नै जिताएका नेताहरुलाई हाम्रो समस्याप्रति कुनै चिन्ता छैन, पीडा हामीलाई झेल्नुपरेको छ ।’
कृषि सामग्री संस्थानमा मलका लागि तीन दिनदेखि लाइन बस्दैआएका उनले एक बोरा मलका लागि कहिलेसम्म किसानहरुले यसरी पीडा झेल्नुपर्ने हो ? प्रश्न गर्दै भने ‘हामी खेती कसरी गर्ने र बालबच्चालाई कसरी पाल्ने जटिल समस्या छ ।’ यस्तै आक्रोश व्यक्त गरे चर्को घाममा लाइन बसेका अन्य किसानहरुले पनि ।
रोपाइँ गर्न चटारो रहेको मौकाको फाइदा उठाउँदै सहकारीले डिएपी, युरिया र पोटास मलमा निर्धारित मूल्यभन्दा प्रति बोरामा रु.४ सयदेखि ६ सयसम्म बढी मुल्यमा बिक्री गर्ने गरेको किसानहरुको आरोप छ । धान रोपाइँको सिजनमा डिएपी, युरिया र पोटास गरी झण्डै १५ हजार मेट्रिक टन रसायनिक मलको आवश्यकता रहेपनि आवश्यकता अनुसार कृषि सामाग्री केन्द्रले आपूर्ति नदिँदा जिल्लामा रसायनिक मलको अभाव भएको जिल्ला सहकारी संघ सप्तरीका प्रबन्धक रमेश कुमार गुप्ताले बताए ।
रसायनिक मलको कालोबजारी भईरहेको विषयमा गुनासो आएकोले अनुगमन भईरहेको मलखाद्य आपूर्ति समितीका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलको दावी छ । यद्यपी मलखादको सहज आपुर्ति नभईरहेका कारण डिलरवालाहरुले किसानसँग चर्को मूल्यमा खुलेयाम मल विक्री भईरहेको किसानहरुको दावी छ ।
Previous : एसपी सिंहलाई सम्मान थाप्न भ्याई–नभ्याई
Next : अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैनः सांसद चौधरी